अमेरिकामा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालीहरूकाे सम्मेलन सम्पन्न - Living with ICT
Home / Featured / अमेरिकामा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालीहरूकाे सम्मेलन सम्पन्न
अमेरिकामा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालीहरूकाे सम्मेलन सम्पन्न
Shiva Basnet Aug 3, 2016	Leaveacomment
अमेरिकामा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील सक्रिय नेपाली मूलका विज्ञहरुको एक सम्मेलन सिकागो शहरमा सम्पन्न भएको छ । ‘युएस नेपाली पोलेसी रिसर्च’ को आयोजनामा गत शनिबारको एक दिने सम्मेलनमा विभिन्न अमेरिकी विश्वविद्यालय एवम अनुसन्धान संस्थामा कार्यरत करिव दुई दर्जन बढी विज्ञहरु सहभागी थिए ।
प्रविधीको अतिरिक्त राजनीति र आर्थिक विकासमा समेत उनीहरुले नेपालको संभावना र विद्यमान चुनौतीलाई विश्लेषण गरेका थिए । अमेरिकामा नेपाली विज्ञ र वैज्ञानिकको भेला नेपालको खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदर, समस्या र समाधानको विषयमा डा. सुरेन्द्रराज देवकोटाले आफनो दृष्टिकोण राखेका थिए भने स्वास्थ्य विज्ञान र शिक्षानीतिका बारेमा डा.केशवपौडेलले आफनो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहकार्य र सम्भाव्यताबारे डा. आमोद पोख्रेल, नेपाल र अमेरिकाको उच्चशिक्षाकाबारेमा डा. अर्जून बञ्जाडे, विद्युतीय संकेतको निकास बारे डा. यादव पण्डित र अमेरिकामा नेपाली आप्रवासी, चुनौती र सम्भावनाबारे डा. देशराज सोन्योकले प्रस्तुति गरेका थिए ।
डा. राजेन्द्र पाज्ञेनी, डा. दीपक कोइराला, दीनबन्धु भट्ट, मदन संग्रौला र किरण थापाले पनि विभिन्न विषयमा विश्लेषण गरेका थिए । यज्ञमूर्ति बञ्जाडे र लेखक शिवप्रकाशले नेपालको खस्कँदो राजनीतिक दुरावस्था र सम्मेलनको उपादेयताबारेमा बोलेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित नेपालका लागि अवैतनीक कन्सुलर जेनरल मार्भिन ए बस्ट्रिनले नेपाली विज्ञहरुको यो उत्साहलाई आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने वचनदिए ।
एकदिने सम्मेलनले डा. आमोद पोख्रेललाई आगामी दुई वर्षका लागि अध्यक्षमा चयन गरेको छ । सदस्य–सचिवमा डा. अर्जून बञ्जाडे छन् भने सदस्यमा कविता खरेल, जगदम्बा अधिकारी, दिनबन्धु भट्ट, डा. राजनपन्त र डा. देशराज सोन्योक चुनिएका छन् ।
Previous नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन कोडिङ बुटक्याम्प हुँदै, युवालई सशक्तिकरण गर्ने उद्धेश्य
Next इन्टरनेटको दुनियाँमा ६० सेकेण्डमा के के हुन्छ ?